Cimiladu waxay soo jeedineysaa bogga ugu fiican ee bogga si aad u tixgeliso
Selenium waa barta tijaabada ah ee farsamaysan oo si otomaatig ah loogu talagalay codsiyada webka ee loo isticmaalo meelo kala duwan. mareegaha iyo daalacayaasha. Selenium wuxuu bixiyaa kaabayaasha loogu talagalay hirgelinta W3C WebDriver, interface interface kaas oo la jaanqaadaya shabakadaha internetka. Barnaamijkan wuxuu ka kooban yahay maktabado iyo qalabyo kala duwan oo u saamaxaya aaladaha shabakadda internetka.
Maxay tahay sababta barnaamijka Selenium?
Barnaamijka Selenium wuxuu diiradda saaraa codsiga tooska ah ee shabakada si uu uga soo saaro xogta bogga internetka. Barnaamijkan wuxuu ka kooban yahay barnaamij kombuyuutar oo loogu talagalay in lagu daboolo baahidaada bogga . Barnaamijka Selenium wuxuu leeyahay afar qaybood oo waaweyn si ay u tixgeliyaan.
Selenium WebDriver waxaa loogu talagalay inay bixiso interface interface fudud. Haddii aad ka shaqeyneysid inaad bogsato bogga internetka ee firfircoon, Selenium-WebDriver waa qayb ka mid ah tixgelinta. Qalabkani wuxuu taageerayaa fiirinta xogta shabakadda bogagga shabakadda oo ay wax ka bedeli karto iyadoon loo baahnayn dib u cusbooneysiinta bogga.
WebDriver wuxuu siinayaa qalab barnaamijka Interface Programming Interface (API) kaas oo bixiya taageero sare oo loogu talagalay baaritaanka webka iyo jarista. Qalabka wuxuu u shaqeeyaa adigoo wicitaanada u diraya tarbiyeynta iyadoo la adeegsanayo taageerada guud ee otomaatiga.
Selenium Grid waxaa loo isticmaalaa in lagu qoro qoraalo ka badan hal mashiin. Ereyada fudud, Selenium Grid wuxuu kuu sahlayaa inaad tijaabisid imtixaannada mashiinnada kala duwan oo ka duwan mid ka badan hal browser. Qorshuhu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku dhex socoto bakhaar ku habboon jawiga fulinta.
Waqtigu waa arrin muhiim ah marka ay timaaddo webka. Weligeed ma ahayn mid sahlan in la xoqo bogga internetka ee firfircoon. Ku xoqi boggan adigoo xoojinaya hawlahaaga. Waxaad samayn kartaa tan adoo isku dayaya in aad isku tijaabisid isla markiiba. Sheyga ugu fiican ee isticmaalka Selenium waa xaqiiqda ah inaad ku shaqeyn karto shabakad isku mid ah browserka, nooca, iyo nooca.
Xakamaynta fogaanta Selenium (RC)
Selenium Integrated Environmental Environment (IDE)
Selenium IDE waa qoraal u shaqeeya sida Firefox extension kaas oo kuu oggolaanaya inaad wax ka beddesho, diiwaangeliso,. Kuwa bilowga ah, Selenium IDE waxay diiwaan galisaa diiwaangelinta waxayna wada cayaareysaa wada-xiriirka dhamaadka-isticmaalka ee Firefox.
Barnaamijka Selenium wuxuu la mid yahay Python 2 iyo Python 3. Haddii aad ka shaqeyneysid diyaarinta darawalada Internet Explorer, waxaad u baahan doontaa 32 iyo 64-bit iskutallaab-compilers iyo Visual Studio 2008. Aqoonta Ruby 2 waa faaiido dheeraad ah.
Ku dhajinta bogagga shabakadda leh Selenium
Boggaga bartilmaameedka ayaa muujinaya xogta la xoqay kadib markii dhammaan foomamka si sax ah loo buuxiyo. Qaar ka mid ah boggaga internetka waxay qaataan wakhti ka hor inta aan la soo dajin. Si aad u xoqdo bogga noocan ah, gundhin adoo adeegsanaya dhamaan fursadahaaga hoos loo dhigayo, kuwaas oo ku jira foomamka shabakadaha gaarka ah. Waxaa muhiim ah in la ogaado in barnaamijka Selenium uu ku waafaqsan yahay Nidaamka Nidaamka Windows, Mac OS, iyo Linux. Ka fududee boggaaga bogga bogga software-ka Selenium Source .